न्युरोलोजी र न्युरोसर्जरी विधामा सिंगो शरीरका अंगहरुलाई सञ्चालन गर्ने ब्रेन, स्पाइन र त्यसबाट निस्किएका नशाहरुमा देखापर्ने रोगहरुको अध्ययन र उपचार गरिन्छ । औषधि र फिजियोथेरापीले निको पार्ने सबै नसाका समस्याहरु हेर्ने विधा न्युरोलोजी हो । नशा, ब्रेन,
सधैँभरि नयाँ नयाँ रोगहरू उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन् र यौनरोगहरू अपवाद होइनन् । यहाँ चार त्यस्ता जीवाणु (ब्याक्टेरिया) बारे कुरा छन् जुन भविष्यमा जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा बन्न सक्छन् । १. नीसेरिया मेनिन्जाइटाइड्स निसेरिया मेनिन्जाइटाइड्सलाई मेनिन्गोकोकस पनि भनिन्छ
कस्तो क्यान्सरमा रेडियोथेरापी दिने ?
हाम्रो मुलुकमा न्युन आय भएका मानिस धेरै छन् । ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलाहरु अशिक्षित छन् । आफैं कमाएर आफ्नो लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका महिलाहरुको संख्या निकै कम छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकले पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो
क्यान्सरमा सजगता र सचेतनाको खाँचो
जीनबाट पहिला नै क्यान्सरको सम्भावना पत्ता लगाउन सकिने स्तन क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर ठूलो आन्द्राको क्यान्सर जिनको आधारमा पहिला नै पत्ता लगाउन सकिन्छ । स्क्रिनिङ गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिने फोक्सोको क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्तन क्यान्सर
फोक्सो स्वासप्रश्वास प्रणालीको मुख्य अंग हो । यसले श्वास फेरेर अक्सिजन भित्र लिने र कार्वनडाइ अक्साइड बाहिर फाल्छ । अक्सिजन बिना मानिस बाँच्न सक्दैन । फोक्सोमा रगतका नलीहरु जोडिएका हुन्छन् । रगतलाई अक्सिजन पु¥याएर स्वस्थ्य बनाउने काम
प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले नेपालमा पहिलोपटक ब्रेन ट्यूमरलगायत सफल न्युरो सर्जरी सेवा सुरु गर्नुभएको हो । सन् १९८९ मा बेलायतबाट ट्रेनिङ सकेर फर्किएपछि प्रा.डा.देवकोटाले वीर हस्पिटलमा युनिट नै खोलेर न्युरो सर्जरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । न्यूरोसम्बन्धि
आज विश्व क्यान्सर दिवस । हरेक वर्षको फेब्रुअरी ४ तारेखलाई विश्व क्यान्सर दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष ‘म छु र म गर्नेछु’ भन्ने मुल नाराका साथ नेपाल लगायत विश्वभर क्यान्सर दिवस मनाइदैछ ।
चितवनमा शिकार खेल्दै गर्दा सन् १९७२ मा ५१ वर्षको उमेरमा राजा महेन्द्रको हृदयघात भएर निधन भएपछि देशमा आईसियू सेवाको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७३ मा वीर अस्पतालमा ५ वटा वेडबाट मेडिकल आईसियू शुरु
निमोनिया, इन्फेक्सन, पोलिट्रमालगायत विभिन्न कारणले शरीरका महत्वपूर्ण अंगहरु फेलिएर भएका बिरामीहरुलाई चिकित्सक र नर्सको टिम मिलेर २४ सै घण्टा निगरानीमा राखेर उपचार गर्ने विधा क्रिटिकल केयर मेडिसिन हो । सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनले ७५ प्रतिशत